Yini oyaziyo Maria Antonova - actress abasha Russian? Uma lincane kakhulu, akumangalisi, ngoba intombazane isiqala umsebenzi wakhe nje, futhi ihora yayo ayetholakala alikafiki. ifilimu yakhe DEBUT senzeka esanda kutholakala, kodwa isungule kakade ngokwaso njengoba actress ezihlukahlukene futhi abanamakhono. Maria Antonova izithombe uzobona kulesi sihloko. Ake sifunde okwengeziwe ngale actress abanamakhono futhi umsebenzi wakhe.
Maria Antonova - actress, ogama biography okucebile ezithakazelisayo. ifilimu yakhe DEBUT wafika ngo-2010, lapho yena okunenkanyezi isiqephu yochungechunge ethandwa "Izimfihlo uphenyo." ukubukeka kwakhe kwaba episodic, futhi uhlamvu lithole isikhathi esincane esibukweni, kodwa sekuvele Uzame, ekuhlolweni kokuqala. Waba umdlali waseshashalazini futhi wayezimisele ukuqhubeka ukunxanela kwakhe nocwaningo zokudala.
Ngemva kwalokho-ke kuyafana ngo-2010 ayenakho indima encane ochungechungeni ubugebengu onesihloko esithi "Usale kahle, Makarov!". Iqhaza main kule filimu serial yayidumile futhi owaziwa umlingisi Sergei Selin. indima Masha kwakungu ezincane, kodwa kwamsiza ukuba okuhlangenwe nakho okulusizo futhi ukuzama ngokwabo esihambisana ochwepheshe kakade owaziwa nesemthethweni.
Maria Antonova - actress, eyabonisa uqobo ngendlela enhle ngisho ekuqaleni kwenkonzo yakhe. Ngo-2011 kwafika ifilimu "Split" uMariya isivele wathola indima eningi nehlala njalo. Lokhu melodrama nge izici zemfihlakalo ngokuvamile wayethanda izilaleli, abaningi babo ziyazithanda lolu hlobo. Umuntu kumelwe amane kokukhumbula impumelelo Amazing we vampire Saga "Twilight", okuyinto kungenzeka, futhi liphefumulelwe Awukwazi ukwenza le filimu.
Umnqopho we izithameli udweshu phakathi abantu nemikhovu eba kule nhlobo osebuneminyaka eminyaka. Ngaphezu kwalokho, kukhona uqhekeko - inzalo ka-imishado exubile, uma singakubeka kanjalo. Maria Antonova wenziwa yesibili rel Intombazane okuthiwa Willow.
Ngaphezu kwalokho, ngo-2011, wafika e iziqephu eziningana ethandwa ahlekisayo uchungechunge "univer. Kule ndawo ababelala kuyo entsha. " Lo mklamo ezihlekisayo zithandwa kakhulu futhi yimpumelelo ezilalelini iminyaka eminingi.
Iqiniso lokuthi uMary wakwazi iqhaza iphrojekthi enjalo futhi avele eyodwa noma ezimbili iziqephu, ngokwako Eqinisweni ongabalulekile lowo, kodwa amantombazane kwaba ithuba uzame yena ezoba nendima entsha ekuphileni.
Maria Antonova, ngo-2012 nango-2013
Waqhubeka enza ngokuphikisana sici amafilimu kanye imikhiqizo ithelevishini, futhi kungakabiphi yaqala ukuba uthole iziphakamiso kakhudlwana futhi mnandi.
Ngo-2012, uMary wenziwa indima nesekelayo ifilimu "Ngithathe kukhanselwa ukufa." Le filimu ezingaqondakali isitjela intombazane oye wathola isipho ongaziwa. Angakwazi ukuzwa ukukhala usizo abantu abafile futhi azulazule phakathi nesikhathi ukulondoloza othile. Heroine uyaqonda ukuthi akusho ukuqeda lokhu ikhono, yilo isipho. Wabe enquma ukuyisebenzisa ukuze kuzuze abantu. Kodwa maduze kukhona umuntu nekhono elinjalo, kodwa kuhlukile injongo.
2013 kwaba ngokuba uMariya abe yathela impela, ngoba waba nengxenye "Black Cats" chungechunge. Le projekthi TV ithole ithandwa enkulu futhi wasamukela ngezandla ezifudumele baxgeki. Maria wathola indima ezincane, kodwa ngokubambisana neNhlangano yabalingisi abanolwazi kanye nezisebenzi waya kuzuze intombazane. Iqhaza main kule multi-okuyingxenye idrama idlalwa Pavel Derevyanko. Kuyinto indaba eminyakeni post-yimpi futhi izenzakalo ezenzeka Rostov-on-Don. Esikhathini eduze kwedolobha asebenza lezigebengu izigebengu. Investigation kuba sobala ukuthi akuyona nje elinenhlese emphakathini noma emgwaqweni amasela. It ibhalwe futhi aqeqeshiwe bomlilo. Kamuva, kuyacaca ukuthi amasosha laseJalimane lobuNazi, awasalayo endaweni Union. Sinenkosi uhlelo njengoba singahambi ngobuqili, futhi uma ngilifeze, ungaqala impi entsha.
izindima eyalandela ifilimu "Batalon"
Lokhu kwalandelwa ngeqhaza ngaphezulu, nomlingisikazi uvele imisebenzi eminingana ithelevishini nokubambisana izinkanyezi ku-movie "iqakala amabhuzu" ngo-2014.
Kugcine wathi ifilimu ukuhluleka, ngoba akukho ezahlukene indaba ethakazelisayo futhi original nokwenza okuhle. Izethameli kanye baxgeki wathatha ifilimu ukuthi yinhle, nakuba iningi musa ngisho unake kuso.
Kodwa isithombe esehlukile ngo-2014 iqhaza Antonova useye waba ngaphezu owaziwa futsi kwabakhona kuphikisana. Le drama engokomlando "Batalon", okuyinto ukhuluma ngezenzakalo kuka-1917, lapho abesifazane ukufa Ibutho ithunyelwe ukulwa amabutho aseJalimane. Maria Antonova iwine indima unkosikazi lesosha, futhi uhlamvu lwakhe ifilimu wabizwa ngokuthi Thumbelina. Nakuba ingxenye enkulu yomsebenzi yokudumisa ezigxeka ithole phambili zesifazane - Mary Aronov for girls iqhaza kule filimu kwaba yingqophamlando career yakhe. Okungenani ngo-Filmography wakhe Awekho ifilimu noma i-TV uchungechunge engakwenza leyo ngxoxo nezethameli.
Thina ngeke iphele kanye ukukhuluma okwangempela futhi mbono izenzakalo kukhonjiswa esibukweni. Engingakusho nje ukuthi amantombazane azama, bese waphonsa ukunikeza konke amaphesenti ayikhulu.
imisebenzi Okunye actress
Ngo-2014 futhi kwaphuma okuthakazelisayo mini-uchungechunge lapho Wayedlala omunye izindima eyinhloko. Lolu chungechunge ibizwa ngokuthi "indiza okusha" Sitshela ngalokho abantu abafuna ukufeza nokuthi yini ofuna ukuyenza ku-Eva kaNcibijane. Kwabaningi, kungcono ithuba ukuqala, noma, kunalokho, enza isinqumo esibalulekile futhi siphile kanye naye.
Maria Antonova udlala indima a yezincwadi abasha, othanda lokuhlukana nendoda eshadile ayethandana, u-Oleg. Uzimisele ukungabi sifinyelele uthando lwakhe, kumnyama kubomvu. Kodwa lokho okuyokwenzeka ekuphileni lokhu?
"Indiza okusha" - romance ejwayelekile ku uNcibijane for yokuchitha isizungu ezimnandi. Maria Antonova isibe yingxenye melodrama kanye neqhaza elibalulekile.
2015 intombazane kwakuhlelwe iphrojekthi eyodwa kuphela - drama impi "satellites". Antonov auditioned ngahlanganyela yokusakaza.
Filmography Maria Antonova akuyona enkulu kakhulu, kodwa actress abasha ethembisa onesifo ikusasa eliqhakazile. Muva nje, waqala uthole iziphakamiso mnandi, ukuze sikwazi Unethemba lokuthi uyokwazi ukuthola amakhono abo ngokugcwele futhi kuyoba ziphoqa umdlali waseshashalazini.
Aroni Ashmore: Filmography, biography, empilweni yakho